Ibsa guutuu Koree Giddu Galeessaa ODP – Fana Broadcasting Corporate
Ibsa guutuu Koree Giddu Galeessaa ODP
Finfinnee, Onkololeessa 7, 2012 (FBC) – Ibsa guutuu Koree Giddu Galeessaa ODP.
Koreen giddu galeessaa ODP marii guyyoota lamaan darbaniif Finfinneetti geggeessaa ture murtoowwwan dabarsuun xumure. Korichi marii isaatin raawwii hojii dhaabbattummaa fi mootummaa, tokkummaa keessoo paartii fi riifoormii paartilee, gufuuwwan jijjiirramaa fi kallattii furmaataarratti mari’ateera.
#Ibsi paartichaa guutun kinooti:
Korichi waltajjii marii guyyoottan lamaan darban geggeessaa tureen ciminootaafi hanqinoota qabsoo waltajjii irra geenyeefi dhimma keessoo paartichaa irratti gamaaggama gadi fageenya qabu geggeessuudhaan kallattiiwwan rakkoo keessoo furuu dandeessisaniifi qabsoo yeroo itti aanuu milkeessan kaa’uudhaan xumureera.
Paartiin keenya ODPn gammachuufi deeggarsa ummata bal’aa Oromoofi ummattoota Itoophiyaa tibba kana badhaasa Noobeelii Nageenyaa Dura Taa’aan keenya Dr Abiyyi Ahimad argatan sababeeffachuun taasifame dinqifannaa addaatiin ilaala. Badhaasni idil-addunyaa kun bu’aa hojii hoggansa paartiifi qabsoo ummata keenyaa ta’uu isaa amana. Boqonnaa waliin injifannutti gammachuun bifa kanaan agarsiifnu humna qabsoo paartichaa akka ta’uufis ni hojjeta.
Kaleessaas akka paartiitti qabsoofnee injifachaa kan as geenye ummata Oromoo qabannee, ummattoota Itoophiyaa waliin taaneeti. Ammas ummata Oromoofi ummattoota Itoophiyaa qabannee injifannoodhaan akka ceenu shakkii hin qabnu. Humnoonni tarkaanfii keenya lakkaa’uun mufataniifi sodaatan olola ummata burjaajessu tamsaasaa jiru. Nuti ammoo akkuma aadaa qabsoo keenya kaleessaa, ummata keenya qabannee, olola sobaafi hawwii diigumsaa isaanii kan fashaleessinu ta’uu keenya ibsina. Bu’uuruma kanaan, Koreen Giddu Galeessaa ODP waltajjii gamaaggama hojii isaa guyyoottan lamaan darbanii irratti hundaa’uudhaan ibsa armaan gadii baasee jira.
ODPn paartii qabsoo ummataa keessatti dhalatee guddatee dha. Imala qabsoo isaa keessatti fedhiifi gaaffii ummataa irratti hundaa’ee of ilaalaafi ijaaraa har’arra ga’eera. Paartichi waltajjii tibbana geggeesseen hanqina tokummaa ilaalchaafi gochaa hoggansa ol’aanaa irraa eegalee hanga caasaa sadarkaan jiruu biratti mul’atu hundeerraa furuun gaaffii ummataa karaa guutuu ta’een deebisaa deemuun dhimma boqonnaan qabsoo irra geenye barbaadu ta’uu isaarratti waliigaleera.
Ergama akka paartiifi mootummaatti kennamu quuqamaafi aantummaan bahachuufi miira itti gaafatamummaan socho’uurratti qaawi kan jiru ta’uusaa ilaaleera. Kanaafuu, hoggansa ol’aanaa irraa eegalee hanga gadiitti miira tokkummaa ilaalchaafi gochaatiin socho’uufi itti gaafatamummaan raawwachuudhaan gaaffiifi fedhii qabsoo ummata keenyaa milkeessuun murteessaa akka ta’e waliigalteerra ga’ameera.
Tokkummaa ilaalchaafi gochaa keessoo paartii cimsuudhaan gaaffiiwwan Oromoo hanga ammaatti deebii argatan akka kahumsaatti, kanneen deebii hin argatin ammoo addatti ilaaluudhaan, yeroo gabaabaa keessatti lakka’amaanii deebii akka argataniif kan qabsaa’u ta’uu kallattii kaa’ee jira.
Biyya sab-daneessa, afaan-daneessaafi aad-daneessa ta’e keessatti sirni federaalizimii sirna siyaasaafi bulchiinsaa filannoo biroo hin qabnee dha. Sirni kun miidhagina heddumminaa kunuunsuun aadaafi duudhaa waloo biyyiifi ummanni ittiin ijaaramu mirkaneessuuf meeshaa murteessaa dha. Kanaafuu, ODPn sirna federaalizimii sab-daneessaa dhugaa Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuun wal-qixxummaafi biliisummaa ummattoota biyyattii mirkaneessuuf ejjennoo hin raafamne kan qabu ta’uu isaa irra deebiidhaan ni mirkaneessa.
Haa ta’u malee, raawwii yeroo darbee keessatti gochoonni aadaafi duudhaa bulchiinsa sirna federaalizimii faallessan hedduun qabatamaatti raawwatamaa turaniiru. Gamaaggama waltajjii keenyaatiin akka ilaalletti, qorannoowwan yeroo darban keessa taasifaman akka agarsiisanitti federaalizimiin Itoophiyaa ummattoota hunda karaa haqa-qabeessa kan hin hirmaachifneefi demokraasii dhugaa kan keessatti hin mirkanoofne ta’uu agarsiisaniiru. Kana malees, faayidaafi dantaan ummataa murna muraasa aangoo mootummaa of harka galchateen qorqamaa kan ture ta’uun isaa beekamaa dha. ODPn hanqinoonni kunneen sirraa’anii sirni federaalizimii sab-daneessaa dhugaan akka lafa qabatuuf qabsoo eegale cimsee kan itti fufun biyya sabaa fi Sab lammooti fi Ummattootni biyya keenyaa bilisummaa, walqixummaa, obulummaa fi badhaadhinaan keesa jiraatan dhugoomsuuf ODPn cimee kan hojjetu ta’uu isaa ibsa.
Gama biraatiin, humnoonni kaleessa sirni fedraalizimii dhugaa akka lafa hin qabanneefi garee muraasni ummata bakka hin buune aangoo mootummaa qabatanaiin heera mootummaa diigaafi sirna federaalizimii faallessaa turan, har’a akka waan heera mootummaaf dhaabbataniifi wabii sirna federaalizimii ta’aniitti of dhaadessuun olola ummata burjaajessu tamsaasaa oolan fudhatama kan hin qabne ta’uu ODPn yaadachiisuu barbaada.
Riifoormiin keessoo ADWUI adeemsa qabsoo paartichaafi gaaffiifi fedhii ummataa kan bu’uureffatee dha. Keessattuu, Yaa’ii Idilee Paartichaa 11ffaa Hawaasaatti geggeeffamerratti hayyootaan qoratamee akka dhiyaatuufi murtii akka argatuuf dhimma kallattiifi murtiin deeggaramee dha. Idaa’amni murtii keessoofi gaaffii ummataa kun paartichi haala uumamaa, demokraasummaafi hirmaachisummaa isaa irratti akka of ilaaluuf carraa gaarii kan uumee dha.
Qorannoon geggeeffame kunis uumamni ADWUI demokraatawaafi haammataa kan hin taane, humna ijaarsa biyyaa gartuun kan qoodu, ummattoota biyyattii gariin alatti dhiisee, murna muraasaan kan murteessu ta’uun isaa adda ba’eera. Caaseffamni ADWUIfi yaadamni demokraasii warraaqsaa ittiin hogganamaa ture murteessummaa ummataa kan daangessu waan ta’eef waltajjii qabsoo irra geenye kanaaf kan madaalu miti.
Yeroo darbe keessatti caasseffama saamicha, dhiibbaa mirga dhala namaa , gochaawwaan farra dimokraasii ittiin raawwatamaa ture diiguun biyya dimokraasii, bilisummaa fi badhaadhina qabdu ijaaruuf riifoormii caaseffama ADWUI irratti taasisuun dhimma murteessaa akka ta’e ODPn ni amana.
Caaseffamni ADWUI hanqinoota hedduun marfame kun gaaffiifi fedhii ummata Oromoofi ummattoota biyyattii deebisuuf kan hin mijanne ta’uu Koreen GG ODP xiinxalee irratti waliigaleera. Bu’uuruma kanaan, ADWUI haaressuun paartii sirnaafi hoji-maata ammayyaa’aan hogganamu uumuun, Yaadama Warraaqsa Demokraasii maqsuun yaadama Idaa’amuutiin bakka buusuuf mari’atamaa akka jiru ni beekama. ODPnis yaadamni Idaa’amuu milkaa’inoota darban caalmaatti cimsuun, hanqinoota jiran ammoo hundeerraa furuudhaan mirgaafi faayidaa dhaloota haaraa kan mirkaneessuu dha jedhee amana. Bu’uuruma kanaan, dhimmi rifoormii ADWUI sirna federaalizimii dhugaa, sabboonummaa sabummaafi tokkummaa biyyaa sab-daneessaa madaallii isaa eeggatee fi biyya badhaate ijaaruun faayidaafi dantaa ummataa ittiin kabachiisuuf tooftaa filatamaa ta’uu isaa amanee milkaa’inasaatiif hojjechuuf murteessee jira.
Xumurarratti, boqonnaan qabsoo irra geenye ulfaatafi walxaxaa ta’us, hanqinaalee keessoo paartii furuudhaan ummata bal’aa of faana hiriirsuufi qormaata isa dura jiru mo’atee seenaa haaraa akka galmeessu gochuuf qabsoon eegale cimee kan itti fufu ta’uu ODPn ni ibsa. Murtoowwanii fi kallattiiwwan ODPdhaan kaawwamaa turan ummata keenya injifannoo gonfachiisaa boqonnaa kanaan nu gahee jrra. Kallattiiwwan amma kaa’amanis injifannoo ummatni keenya wareegama isaatiin aragate akka eeggatee of harka tursuu fi injifannoowan dabalataa isa gonfachiisan ta’uu beekuun ummatni keenya raawwii isaaf tumsuutu irraa eeggama. Calqabaafi xumurri qabsoo keenyaa gaaffiifi fedhii qabsoo ummata keenyaati. Qabsoo dhaloonni kitimaa hedduu itti kaffaleefi gaaffiiwwan ummata keenyaa hundi deebii akka argataniif kan yeroo kamiiyyuu caalaa ciminaan kan qabsaa’u ta’uu ODPn irra deebi’ee ibsa!
Wal taanee yoo hojjenne, rakkoo nuti hin injifanne hin jiraatu!!!
Koree GG ODP
Manni Maree ADWUI walitti makamuu Paartii mirkaneesse
Lammiileen Ityoophiyaa 100 Sudaanii deebi’an
Kilaashii 70, rasaasaa fi meeshaalee kan biroo too’ataman
Hokkara magaalaa Adaamaatti mudateen walqabatee namoonni shakkaman 179 seeratti…
Murtiin Ummata Sidaamaa Sirna Federaalaa Jabeessa – Dooktar…
Dooktar Abiy du’a obboleessa preezdaantii Emireetoota…
Walga’iin Mana Maree ADWUI eegalame
Filannoon murtee ummata Sidaamaa nagaan xumurame